On avr 17, 2019 17 004
Ny 10 Aprily 2019 no voatendry teo anivonny filan-kevitry ny minisitra ny lehiben’ny Etamazaro ny Tafika Malagasy ( EMGAM) vaovao, ny Général de Division RAKOTONIRINA Theophile. Izay tsy vahiny raha ny fitantana ity andraikitra ity noho izy izay efa lefitra faharoa ny teo fibaikoana ny Tafika Malagasy .
Notontosaina Afakomaly, teny aminny foiben’ny Etamazaoro ny Tafika teny Andohalo ny famindram-pitantanana teo aminy sy ny Général de Division RAZAFINDRAKOTO Lanto, nitantana teo aloha.
» Nisy ezaka natao teo anivon’ny Tafika izay nentina ho fandrindrana ny fahalemana teto Madagasikara , tsy vahiny rahateo aminny fitantanana ny Jeneraly RAKOTONIRINA Theophile. Hantenaina fa tonga dia handeha ny asa rehetra. Ny fanitsiana sy fanatsarana efa natao, teo koa ny sarin’ady iraisam-pirenena nandraisan’ny tafika Malagasy anjara , ny fananganana ny Bataillon Inter-Arme , ny fanatsarana ny fitaovana vaovao toy ny fizarana fitafy vaovao ho entina miasa , izany rehetra izany dia natao ho fampikarana ny lentan’ny Tafika Malagasy », hoy ny lehiben’ny fibaikoana teo aloha.
Tetsy andanin’izay, nanamafy ny fahavononany hatrany hanohy ny ezaka efa vita ny jeneraly Rakotonirina Théophile. » Mbola maro ny ezaka, hilana ny fandraisana andraikitra ny tsirairay. Tsy tokony hiandry ela izany fa raha misy zavatra azo haverina amin’ny laoniny dia havereno amin’ny laoniny. Indrindra fa ireo izay ilaina maika kanefa tsy ho vesatra ara-bola », hoy ny Lehibenny Etamazaoro jeneralin’ny Tafika Malagasy vaovao.
Ny jeneraly isany Rakotonirina Théophile , lehiben’ny Etamazaoro jeneralin’ny Tafika Malagasy vaovao ( Ankavia) sy Razafindrakoto Lanto Arijaka teo aloha ( Ankavanana)
Manentana ny rehetra mba samy haka ny andraikitra tandrify azy ity manamboninahitra jeneraly ity, amin’izao fotoana handraisany ny fibaikoana izao.
SOAMANDRAKIZAY: TSY MANAIKY NY FANTIANTOKA NAHAZO AZY NY MPIVAROTRA SAKAFO
CCI IVATO: LANCEMENT DU PLAN D’ACTION KAZAN PAR LE PRÉSIDENT ANDRY RAJOELINA
COOPERATION : USAID Launches Farmer-to-Farmer Program in Madagascar